သစ်ပင်တွေ ရှင်သန်ကြီးထွားလာဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပေမယ့် ခုတ်လှဲဖို့အတွက်တော့ မိနစ်ပိုင်းပဲ ကြာပါလိမ့်မယ်။
ဒလ-တွံတေးကားလမ်းဘေးက သစ်ပင်တွေ အများအပြား ခုတ်ထားတာကို မကြာသေးခင်က တွေ့ရတဲ့အတွက် ဧရာဝတီဘလော့မှာ ဖော်ပြဖို့ အခုလို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတချို့ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်တိုင်တွေစိုက်၊ ဓာတ်ကြိုးသွယ်ဖို့ အတွက် သစ်ပင် အများအပြားကို ရှင်းပစ်လိုက်တာလို့ ယူဆရပါတယ်။
နေရာက ရန်ကုန်ပေါက် ကျေးရွာနားမှာပါ။
အဲဒီမှာ လမ်းဘေးက သစ်ပင်တွေကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်တုန်းက စိုက်ထားကြတာလည်းတော့ မသိပါဘူး။
အခုလို ရှင်းပစ်လိုက်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းစရာ လိုချင်မှ လိုပါလိမ့်မယ်။
လွတ်လပ်စွာ သစ်ပင်ခုတ်ခွင့်ရတဲ့ထဲ စည်ပင်သာယာဌာန၊ လျှပ်စစ်ဌာနတို့ ပါဝင်နေသလား ဆိုတာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
သစ်ပင်တွေ ရှင်သန်နေတာ ကျက်သရေ ရှိပါတယ်။
သစ်ပင်တွေ အများကြီးကို ခုတ်လိုက်တာကတော့ အကျည်းတန်လှပါတယ်။
ပုံထဲက သစ်ပင်များ အခုတ်ခံလိုက်ရတာကတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ တည်ရှိလို့ မှတ်တမ်းတင်မိကြတာပါ။
သစ်တောတွေရှင်း၊ တောင်တွေကို ကတုံးတုံးလိုက်တာကတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ သိပ်မဟုတ်တဲ့အတွက် အများက သတိထားမိကြမယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ရန်ကုန်ပေါက်ရွာနားက နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်အရေအတွက်ကတော့ မနည်းမနောပါပဲ။
ဓာတ်တိုင်တွေစိုက်ဖို့အတွက် ဆိုရင်လည်း တခြား ရွေးချယ်စရာ နေရာ ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။
လမ်းဘေးအိမ်တွေရဲ့ ကျောဘက်မှာ လယ်ကွင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာကလည်း ရွေးချယ်စရာတခုပါပဲ။
ရပ်ရွာထဲ သစ်ပင်အများအပြား ခုတ်ပစ်တာကို ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်ခြင်း ရှိမရှိ မသိရပါဘူး။
ဒါက သေချာပေါက် ကန့်ကွက်သင့်တဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်လား။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေ အရင်ထက် ပိုပြီး လှုပ်ရှားကြဖို့ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကားချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ရာမှ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦးသေဆုံး၊ ဗိုလ်ကြီး ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ကျောက်ပန်တောင်းကားလမ်းပေါ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ ည ၀၉း၃၀ နာရီက မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၄/၂ အနီးတွင် မိတ္ထိလာ-ကျောက်ပန်းတောင်းဦးတည်မောင်းနှင်လာသော Crown 9C/8068 နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မောင်းနှင်လာသော လိုက်ထရပ်ကား 8B/3628 တို့ တိုက်မိပြီး လိုက်တရပ်ကားပေါ်မှ ဗိုလ်ကြီး မျိုးဝေ (၂၄)နှစ် သံချပ်ကာတပ်ရင်း ဗန်းမော်မှာ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ကြီးအောင်ဇော်ထက်(၂၅)နှစ်၊ ဗိုလ်ကြီးဖြိုးဇော်ဇော်(၂၆)နှစ်တို့မှာ ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိ၍ မိတ္ထိလာစစ်ဆေးရုံသို့ အတွင်းလူနာအဖြစ် တင်ပို့ထားရကြောင်း သိရသည်။
Crown ကားယာဉ်မောင်း ကိုသက်ဇော်အောင် (၂၁)နှစ်မှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျှက်ရှိပြီး လိုက်ထရပ်ယာဉ်မောင်း ဦးမြင့်အောင် (၄၄)နှစ်တို့ ၂ဦးစလုံးအား ရှမ်းမငယ်ရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၂/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ-၃၃၇/၃၃၈-၃၀၄(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီခွဲအချိန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့၊ အမှတ်(၁)စံပြရပ်ကွက် အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ စေတုတ္တရာ မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ စေတုတ္တရာမြို့၊ အမှတ်(၁) စံပြရပ်ကွက်နေ သီဟစိုး(ခ)သားစိုး(၂၀)နှစ်သည် ၎င်းမောင်းနှင်သည့် ၁က/××××× အီဇူးဇူး အဝါရောင် (၆)ဘီးယာဉ်အား နောက်ဆုတ်မောင်းနှင်စဉ် လမ်းဖြတ်ကူးလာသည့် တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ မောင်ဇေယျာလွင် (၅)နှစ်အား ယာဉ်၏ ယာဘက်နောက်ဘီးဖြင့် ကြိတ်မိ၍ မောင်ဇေယျာလွင်မှာ ဦးခေါင်းဝဲ/ ယာချိုစောင်း ပေါက်ပြဲကြေမွ၊ ဦးနှောက်ထွက် ဒဏ်ရာများရရှိပြီး အခင်းဖြစ်နေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် သီဟစိုး(ခ)သားစိုးအား စေတုတ္တရာမြို့မ ရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၁/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သင်သေရင်တောင် page ကိုဆက်လက်ပြထားပေးဖို့ facebook စီစဉ်သတ်မှတ်
Facebook အသုံးပြုသူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားတာနဲ့ ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို Facebookက ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး သက်ရှိထင်ရှားဖြစ်စဉ်က ထားခဲ့တဲ့ settingတွေအတိုင်း ဆက်လက်ရရှိပါတော့မယ်။ အရင်ကဆို သေဆုံးသူအမှတ်တရ page တွေကို သေဆုံးသူရဲ့ friend တွေကပဲ မြင်ရပါတယ်။
ဒီအပြောင်းအလဲတွေကို အသုံးပြုသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ညှိုနှိုင်းပြီးမှ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ facebookကပြောပါတယ်။
‘သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ သူတချို့ကိုလည်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲစေမှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ချစ်တဲ့သူရဲ့ Timelineကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ထားရှိပေးဖို့ တောင်းဆိုလေ့ရှိကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေတုန်းက အဲ့ဒီ့အကြောင်း စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ချစ်တဲ့သူတွေကို အမှတ်ရနိုင်ဖို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမှတ်တရ ကိစ္စတစ်ခုစီကို ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ မလွယ်ကူတဲ့မေးခွန်းတွေ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ ပြန်မေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ လူတွေက ဘယ်လိုခံစားကြလိမ့်မလဲ။ ဆုမွန်ကောင်းတွေ၊ သွားလေသူရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ ဂုဏ်ပြုရလေမလား။ ချစ်ခင်ရသူကို ဆုံးရှုံးသွားလို့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေရသူတွေအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးကြမလား။’ ဆိုပြီး facebook ကပြောခဲ့ပါတယ်။
Facebook team ဟာ သူတို့ရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အံ့ဖွယ် အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
‘ခုထိတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ account ကို အမှတ်တရထားရှိမယ်ဆိုရင် friends-only မြင်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကန့်သတ်ထားတယ်။ ဖြစ်နေပုံကတော့ သေဆုံးသွားသူနဲ့ facebook မှာ friend မဖြစ်ထားခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှ ၀င်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီနေ့ကစပြီး ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်သွားမှာပါ။ သေဆုံးသွားသူ page ကထားရှိတဲ့ privacy အရ အမှတ်တရ profileတွေကို ၀င်ကြည့်နိုင်တော့မှာပါ။ လူတစ်ယောက် သူ့ဘ၀မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ဟာ လေးစားပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ မြင်ရတဲ့အတိုင်း တခြားဝင်ရောက် ကြည့်ရှုချင်သူတွေကိုလည်း ၀င်ရောက်မြင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။” လို့ facebook team ကပြောပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်းမှ မြန်မာ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမည်
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေမှာ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအကြား ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ မြန်မာစီးပွားရေးဖော်ရမ်တခု ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးမှ တိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောသွားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မြန်မာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် ၅၀၀ လောက် တွေ့ဆုံကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အဆောက်အဦး သတင်းသွားရောက်ယူခဲ့တဲ့ ကိုသားညွန့်ဦးက ဒီအကြောင်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
လက်ရှိ ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ အရေးပါလာတဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်တွေကို သိရှိလိုတာကြောင့် သူ့အနေနဲ့အခုလို တွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောသွားပါတယ်။ သူတို့အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုနဲ့အတူပဲ ကဏ္ဍစုံမှာ အခြေခံကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခြေအနေများကို လာရောက်နားထောင် လေ့လာဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အဓိကနေရာကနေ စွမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ အခက်အခဲများနဲ့လိုလားချက်များကို နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။”
လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို သမ္မတက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ ဒီအတွက် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ကုန်သွယ်မှုတန်ဘိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၂၇ ဘီလီယံကနေ ၂၀၁၂ ဖေဖ၀ါရီမှာ ၂၂.၅၇ ဘီလီယံအထိ တိုးလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းမှာလည်း ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာအထိ နိုင်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၈၈ ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးအားဖြင့် သန်း ၈,၂၀၀ ကျော်၊ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၁၄၅ ခု တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၁ သိန်းကျော် တိုးလာတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုရှိလာအောင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖော်ရမ်တရပ် ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ သမ္မတက အခု ဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ ကြေညာသွားပါတယ်။
“အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၊ မြန်မာ Business Forum ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ လိုင်း ၂ လိုင်းရှိပါတယ်။ တဘက်က ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နောက် လုပ်ငန်းအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်တယ်။ နောက်တခါ အဲဒီလုပ်ငန်းအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာ Working Group တွေ၊ နောက် ထိန်းညှိပေးမယ့် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွေ၊ အပေါ်ကနေ ကွပ်ကဲပေးမယ့် အုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေ၊ တဘက်က ဒါတွေပါသလိုပဲ ကျနော်တို့အစိုးရဘက်ကလည်း စောစောကအကြံပြုသလိုပဲ၊ ကျနော်ဦးစီးပြီးတော့မှ ကျနော့အောက်မှာ ဒု-သမ္မတတစ်ယောက်ထားပြီးတော့ ဒီဘက်ကလိုပဲ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးမယ့် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွေ၊ နောက်တခါ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မယ့် Working အဖွဲ့တွေ၊ Delivery Unit တွေ၊ Delivery unit တွေလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ Mechanism ကြီးကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှ ပုဂ္ဂလိကနဲ့အစိုးရ - အမြဲမပြတ် ထိတွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှ ကျနော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဒီအဖြေကို ကျနော်တို့ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကျနော်တို့ရှိပါတယ်။”
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရကဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ၊ ဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ချပြပြောဆိုသွားသလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်း သူတို့ကြုံတွေရတဲ့အခက်အခဲ လက်တွေ့အခြေအနေတွေကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုကြပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့ များသောအားဖြင့် သူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုတောင်းတာ တွေ့ရသလို သူတို့လုပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအလိုက် နိုင်ငံကို ဘယ်လောက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသလဲဆိုတာတွေကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအကြား အခုလို ထိစပ်မှုမျိုးဟာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးက VOA ကို ပြောပါတယ်။
“ဒီတခေါက်ကတော့ ကျနော်တို့က အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပေးသင့်တဲ့ message တွေကို ပေးရတာရယ်၊ နောက် သမ္မတဘက်လည်း နိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီး ဘယ်ကိုသွားနေတယ်၊ ဘယ်အထိရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ message ကိုလာပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရယ်၊ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေကတော့ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အကျိုးရှိသလို ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုးကနေ အခြေပြုပြီး ကျနော်တို့က PPP ပေါ့၊ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကိစ္စရပ်တွေကို အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။ ။ သမ္မတကတော့ သူ့တို့အခြေအနေတွေ၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရှင်းပြတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်း ကိုယ့်အခက်အခဲတွေ၊ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ပြောပြတယ်။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ရမှာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပေါ့။ အဲဒီတော့ ရလာဒ်ကောင်းတွေရော တကယ်ထွက်လာမယ် ထင်လား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာကို ရလာဒ်ကောင်းတွေကတော့ ရလည်းရရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလာဒ်ကောင်းတွေ ရရှိနေတဲ့ဟာတွေက များစွာလည်း ရလာဒ်ကောင်းတွေက ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် ဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေကနေတဆင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပြောကြားလိုပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရန်ကုန်မှာ အခုလို တွေ့ဆုံတာဟာဆိုရင် ဒါဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သမ္မတနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ တွေ့ပြီးနောက်မှာလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့အခက်အခဲတွေ ဆွေးနွေးတာ၊ တဘက်က ပြန်လည်ရှင်းလင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးတင်နိုင်သိန်းတို့နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေတို့က ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို မဖော်ဆောင်ခဲ့ဟု ဦးသိန်းစိန် ဝန်ခံ
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ။ ဒီလိုဖြတ်သန်းမှုကြောင့် ပုံစံကျနတဲ့ အမျိုးသားစီးပွားရေးတစ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုမရှိသေးတာလို့ မြန်မာထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံပြီး ပြောခဲ့တာပါ။
၉ဝ%ရှိတဲ့ ပုဂလိကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာဖြစ်တာကြောင့် စီးပွားရေးသမားတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကဏ္ဍကို မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့သလို နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရင် စီးပွားရေးတိုးတက်မယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ရင် ပွင့်လင်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေကို တွေ့ဆုံခဲ့သလို ခရိုနီလို့သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ ထိပ်သီးစီးပွားရေးသမားတွေလည်း အစုံအလင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုအောက်မှာ ရှိနေဆဲ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းမှာ တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေကို အခွင့်အရေးပေးဖို့နဲ့ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား သိချင်တယ်လို့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးတေဇက ဆိုပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလို ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကိုလည်း လက်ခံဖို့အသင့်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီကာလမှာ ကျော်ကြားတဲ့သူတွေ ခရိုနီ၊ မတရားလုပ်သူတွေအဖြစ် ပြောဆိုခံရတာကို တရားသဘောအဖြစ် သူနားလည်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
AIDS နှင့် မြန်မာ (၃)
အခုဘယ်လို လုပ်နေကြလဲ၊ ပထမဦးဆုံး ဘယ်သူ ဘယ်အုပ်စုဟာ ဒီလို ပညာပေးသတင်းတွေ အလိုဆုံးလဲ၊ တစ်နည်းဆိုရင် AIDS ရနိုင်ဖို့ရာ အကောင်းဆုံးသော အုပ်စုဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီသူတွေကို ဦးစားပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ ပညာကို ပေးရမယ်။ (ဥပမာ အကာအကွယ် ကွန်ဒွန် သုံးရန်) နောက်တစ်ဆင့်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်နည်းကိုသုံးပြီး ပညာပေးမလဲ။ လူပုံလယ်မှာ ဆွေးနွေးလို့တော့ မရပေမယ့် AIDS ကာကွယ်မှုအတွက်တော့ အရေကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြောပြရအောင်အတွက် အုတ်အော်သောင်းတင်း မဖြစ်စေဘဲ ပြောပြနိုင်တဲ့ အချိန်အခါနဲ့ နေရာကို ရွေးရမယ်။
မင်းဂွတ်သီးနှင့် ကင်ဆာရာဂါအကြောင်း ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ
ကျွန်တော့်ကိုလဲ ဘာမှ မလုပ်ဘဲထားရင် အဲဒါရှာဝယ်သောက်ကြည့် ဖို့ တိုက်တွန်းသည့်နှင့် ကျွန်တော်လဲ ချက်ချင်းဆိုသလို စိတ်ကူးရှိရာ ဃသျအခသ က မင်းဂွတ်သီး အရည်သွားဝယ်သောက်ကြည့်မိသည်။
စာရေးသူလုပ်ဆောင်သမျှ နည်းလမ်းများကို သိရှိဆွေးနွေးလိုသူ များ ဖုန်း 4156652279/Skype:Harry.lin 7/Email:[email protected] သို့ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကုသိုလ်ပြု လို၍ အသင့်စောင့်ကြိုလျက်ပါ။
ဖတ်ရှုရသမျှကို ဆင်ခြင်ပြီး ရာသီပေါ် အသီးအရွက်များကို သစ်သီး ဖျော်ရည်စက်ထဲထည့်၍ ရေအနည်းငယ်မျှထည့်ပြီး ရေခဲမုန့်လို ပျစ်ပျစ် ကလေး Smoothy လိုဖြစ်အောင် ကြိတ်ပြီးထမင်းမထားခင်တစ်နာရီ ခန့်ကြိုစားပြီးမှ ထမင်းစားပါသည်။
အမှိုက်မှ စွမ်းအင်ထုတ်မည့်စက်ရုံ မတ်လစဆောက်မည်
တစ်ရက်လျှင် အမှိုက်တန်ချိန် ၈၀၀ ကျော် စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံတွင် အမှိုက်မှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် မီးစက် (Generator) အပါအဝင် စွမ်းအင်ထုတ် စက်ရုံကို မတ်လအတွင်း စတင်ဆောက်လုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Chasson International က စွန့်ပစ်အမှိုက်များမှတစ်ဆင့် ဂက်စ်ထုတ်ယူကာ Generator ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“အခုတော့ သုတေသန လုပ်နေတယ်။ စီမံကိန်းကာလက သုံးနှစ်ပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
စွန့်ပစ်အမှိုက်မှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံနှင့် ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတို့တွင် လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတွင် အမှိုက်မီးရှို့စက်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို မြန်မာ-ကိုရီးယား အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရရှိထားကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနထံမှ သိရသည်။
“လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ကုမ္ပဏီတင်ဒါ ရွေးကတည်းက အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့တော့ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကို အမှန်တကယ် အကျိုးပြုပါ့မလားလို့ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တင်ဒါအောင်တဲ့အချိန်က တင်ပြတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် ၃၃ မြို့နယ်မှ တစ်ရက်လျှင် အမှိုက်တန်ချိန် ၁၆၀၀ ကျော် ထွက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံကနေ ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝအကြောင်း ရိုက်ကူးဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
မြန်မာအလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာက အနုပညာ၊ ပရဟိတ နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံအလုပ်တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမကို လတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ ‘နန်းခင် လက်ရှိရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးသွားဖို့တော့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ နန်းခင်ရဲ့ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဂျပန်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုက ရိုက်ကူးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းထားတာရှိတယ်။ အဲဒီ့အတွက် နန်းခင်တို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ စီစဉ်နေပါပြီ။ ညီမ အားတဲ့အချိန်နဲ့ သူတို့ရိုက်ကူးရေးအချိန်တွေ ညှိုနှိုင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်မတ်လကုန်လောက်မှာ ရိုက်ကူးဖြစ်မှာပါ။ သူတို့က ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအထင်ကရနေရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပုဂံ ၊ အင်းလေးဒေသတွေမှာ အုပ်စုတွေခွဲပြီးတော့ ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်သလို နန်းခင်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လည်စရာနေရာတွေ ၊ သွားသင့်တဲ့နေရာတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာပါ။ နောက်ထပ်နေရာဒေသတွေကိုတော့ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ ရိုက်ကူးသွားမှာပါ။ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝအကြောင်းကို ဂျပန်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သုံးရက်ကြာရိုက်ကူးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်’လို့ သူမက ပြောပြသွားပါတယ်။
အင်းစိန် မီးရထားစက်ခေါင်းစက်ရုံပိုင် မြေပေါ်မှ ကျူးကျော်များ ထပ်မံဖယ်ရှား
အင်းစိန်မြို့နယ် ဈေးကုန်း အရှေ့ရပ်ကွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း စက်ရုံနှင့် အင်းစိန်မီးရထား စက်ခေါင်း စက်ရုံဝင်းကြားရှိ ကျူးကျော် နေအိမ်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန့်က မီးရထား စက်ခေါင်းစက်ရုံ ဝန်ထမ်း ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် ငါးကြိမ်မြောက် ထပ်မံဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်သူများက ပြောကြားသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးများ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးချိန်အထိ စောင့်ရန် ခွင့်တောင်းသော်လည်း မရကြောင်း ဒေါ်သီသီက ပြောဆိုသည်။
“နေစရာမရှိလို့ နေတာပါ။ အစိုးရ မြေဆိုတာ သိပြီးသား။ တစ်ချိန်ဖယ် ပေးရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်” ဟု ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင်သူ ၎င်းကဆိုသည်။
ဟင်္သာတတွင် စီးပွားရေး မကောင်းသဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းလာပြီး ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ဦးမြဟန်က ပြောကြားသည်။
အင်းစိန်မီးရထား စက်ခေါင်းစက်ရုံပိုင် မြေပေါ်မှ ကျူးကျော်အိမ်အားလုံး ဖျက်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဈေးကုန်း အရှေ့ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းထွန်းက ပြောဆိုသည်။
ဆန်စပါး ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လာဘ်စားမှု ရှိသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက် ယင်လပ် ငြင်းဆို
ဘန်ကောက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁
ထိုင်းအစိုးရ၏ ဆန်ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်တွင် လာဘ်စားမှုများ ရှိကြောင်း လာဘ်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်၏ စွပ်စွဲချက်ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ် ရှင်နာဝပ်က ပယ်ချလိုက်ကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းလာဘ်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က ကြာသပတေးနေ့က ပြောကြားရာတွင် အစိုးရ၏ ဆန်ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်တွင် လာဘ်စားမှုများ ရှိနေသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်ကို တရားစွဲဆိုဖွယ် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်သာ လာဘ်စားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါက ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုင်းတွင် ယင်းလပ် ဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒပြသူများက ယင်းလပ် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေး ဆန္ဒပြလျက် ရှိစဉ်တွင် ယခုကဲ့သို့ လာဘ်စားမှုဖြင့် စွပ်စွဲ ခံရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“လာဘ်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မမှာ အပြစ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်မကို ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားချင်တဲ့ သူတွေက အခုလို စွပ်စွဲတာ ခံရပေမယ့်လည်း ကျွန်မအနေနဲ့ အခုစွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့ရာမှာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ် ရှင်နာဝပ်က ၎င်း၏ Facebook တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့သော ယင်းလပ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာ အကျပ်အတည်း ဆိုက်လျက်ရှိပြီး ယင်းလပ် ဆန့်ကျင်သော အင်အားစုများက ဘန်ကောက်ရှိ အစိုးရ ရုံးများကို ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြမှု ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်က ရဲတပ်ဖွဲ့က နှိမ်နင်း ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
သို့သော် ဆန္ဒပြသူများက ပြန်လည် အင်အားစု၍ တနင်္လာနေ့က ထောင်နှင့်ချီသော ဆန္ဒပြသူများသည် ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးကို ဝိုင်း၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ ရုံးတက်ခြင်းကို တားဆီး နှောင့်ယှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရ၏ ဆန်ဝယ်ယူရေး မူဝါဒအရ ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုသော နှုန်းဖြင့် အစိုးရက လယ်သမားများထံမှ ဆန်များ ဝယ်ယူလျက် ရှိသည်။ အဆိုပါ မူဝါဒမှာ လယ်သမားများ အလွန်နှစ်သက်သော မူဝါဒ ဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆန်တင်ပို့ ရောင်းချမှုကိုမူ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ မူဝါဒသည် အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားပြီး၊ ငွေကြေး အလွဲသုံးစား မှုများလည်း ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဝေဖန်သူများက ထာက်ပြ ပြောဆိုကြသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်ကို ထောက်ခံသူများ ဖြစ်သည့် လယ်သမားများသည် ၎င်းတို့ ရရန်ရှိသော ငွေများ အပြည့်အဝ မရသေးခြင်းကြောင့် လွန်ခဲ့သော လမှစ၍ ဆန္ဒပြမှုများ မကြာခဏ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရ အနေနှင့် ပါလီမန် အစည်းအဝေးသစ် မစမချင်း ငွေကြေး တောင်းခံနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆန္ဒပြ လယ်သမားများကို ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း ရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူကရိန်းလုံခြုံရေးတွေ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကို လွတ်လပ်ရေးရင်ပြင်တွင် သယ်ဆောင်ဂုဏ်ပြု
ယူကရိန်းလုံခြုံရေးတွေက ပစ်ခတ်လို့ သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ညက ကိဗ်မြို့က လွတ်လပ်ရေးရင်ပြင်ကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာပြီး ယူကရိန်း အတိုက်အခံတွေနဲ့ ကိဗ်မြို့ ပြည်သူတွေက ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေမှာ နှစ်ရက်အတွင်း လူ ၇၅ ဦး သေဆုံးခဲ့တာဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ဆိုဗီယက်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ခဲ့အပြီး အဆိုးဝါးဆုံး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တဦးက သူတို့ဟာ အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ အတိုက်အခံတွေဟာ ဖြေသိမ့်မှုလေးကို လိုချင်တာမဟုတ်ပဲ လူသတ်အစိုးရ တခုလုံး ထွက်သွားတာကို လိုချင်တာပါလို့ လွတ်လပ်ရေးရင်ပြင်က လူထုတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဆေးပစ္စည်း လိုအပ်ချက် ဂျပန်အစိုးရကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ်ကြီးတွင် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ဂျပန်ယန်း ၉၇၈ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅ သိန်းဝန်းကျင်) ထောက်ပံ့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ်ကြီး Mr.Mikmo Numata က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် အနီးတစ်ဝိုက် မြို့နယ်များရှိ လူနာအများဆုံး လာရောက် ကုသကြသော်လည်း လုံလောက်သော ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ မရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ပြည်သူ့ဆေးရုံများ ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Mr.Mikmo Numata က ပြောဆိုသည်။
ဂျပန်အစိုးရက ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လမ်းဖောက်လုပ်ရေးအတွက် ဂျပန်ယန်းငွေ ၁,၇၁၆ သန်း (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း) ကို အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနထံ ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်း ယင်းဂျပန်သံရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
1လုံခြုံရေး အဆီးအတားတွေ အထပ်ထပ်ချထားတဲ့ သမ္မတအိမ်တော်ကို ကားဗုံးခွဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ၀တ်ပြုတဲ့ ဗလီနားအထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမတ က ထိခိုက်မှုမရှိပဲ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုမာလီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့ အဆိုအရ စစ်သွေးကြွ ၉ ဦးလုံးကို နေရာမှာတင် အာဖရိကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အမည်မဖော်လိုတဲ့ အာဏာပိုင်တဦးကတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးနဲ့ ယခင်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်လည်း စစ်သွေးကြွ ၆ ယောက်နဲ့အတူ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မိုကာဒီရှု မြို့ကနေ အာဖရိက ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ စစ်သွေးကြွတွေဟာ ဒီရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်း မြို့တော်ကို အသေခံတိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်လာတာလည်း ဖြစ်ပြီး ဆိုမာလီအစိုးရဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေး ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိဘူးဆိုတာကို ပြသရာရောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယူကရိန်းသမ္မတနှင့် အတိုက်အခံတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး
နှစ်ရက်အတွင်း လူ ၇၅ ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က ယူကရိန်းသမ္မတ ဗိုက်တာ ယန်နုကိုဗစ် နဲ့ အတိုက်အခံတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
အီးယူရဲ့ ကြားဝင်စေ့စပ်မှုနဲ့ အခုလို သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း ယူကရိန်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို စောပြီးကျင်းပဖို့လည်း သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ရုရှား ကျောထောက်နောက်ခံ သမ္မတ ယန်နုကိုဗစ် နဲ့ အီးယူကျောထောက်နောက်ခံ ယူကရိန်း အတိုက်အခံတွေဟာ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းဖို့၊ သမ္မတရဲ့ အခွင့်အာဏာကို ပြန်လည် လျော့ချမယ့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ စတဲ့ သဘောတူညီတွေ တဆက်တည်း ရရှိခဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မလုပ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ သမ္မတ ယန်နုကိုဗစ် က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို စောပြီး ကျင်းပမယ်လို့လည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီမှု ရအပြီးမှာပဲ သမ္မတရဲ့ လက်ရှိအခွင့်အာဏာကို ကန့်သတ်မယ့် ၂၀၀၄ အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်ပြဌာန်းဖို့၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်း လူ ၇၅ ဦး သေဆုံးမှုမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ ယူကရိန်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို ဖြုတ်ပစ်ဖို့၊ ၂၀၁၁ ကတည်းက ထောင်ချခံထားရတဲ့ ယခင်ယူကရိန်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း အတိုက်အခံ ယုလီယာ တာမိုရှမ်ကို ကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွေကိုလည်း ယူကရိန်းပါလီမန်က မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရကိုလည်း ၁၀ ရက်အတွင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
လေယာဉ်စီးခကို ကြာမြင့်ချိန်အပေါ်မှုတည်ပြီး တွက်ယူမယ့် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း
လေယာဉ်စီးခကို ကြာမြင့်ချိန်အပေါ်မှုတည်ပြီး တွက်ယူမယ့် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်ကို MAI က စင်းလုံးငှားလေယာဉ် ချာတာဖလိုက်ဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း MAI က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူဆန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နဲ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို စင်းလုံးငှားလေယာဉ် ချာတာဖလိုက်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က စတင်ပျံသန်းပြေးဆွဲလိုက်တာပါ။
myanmar airwayMAI လေကြောင်းလိုင်ဟာ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း တခုနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်မြို့ကို လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်အဖြစ် စတင်ပြေးဆွဲပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း MAI ရဲ့ စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ငှားခဟာ တနာရီကို ဒေါ်လာခြောက်ထောင် ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ခရီးအကွာအဝေးကြာမြင့်ချိန်နဲ့ နိုင်ငံအလိုက် လေဆိပ်ဝင်ပေါက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မအေးမရသာ က ပြောပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ MAI လေကြောင်းလိုင်းဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကို ချာတာဖလိုက် စင်းလုံးဌားလေယာဉ်တွေနဲ့ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ခရီးသည်တွေ အတွက်ပုံမှန် လေကြောင်းလိုင်း ပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့လည်း မအေးမရသာ က ပြောပါတယ်။
အမ်အေအိုင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြ်ို့၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ၊ ဂေါင်ရှူး၊ ဖနွမ်းပင်၊ ဆီယံရိဒ်နဲ့ ဂါယာမြို့တွေကို ခရီးသည် ၁၂၀ နဲ့ ၁၈၀ ဆံ့ လေယာဉ်တွေနဲ့ ပျံသန်းပြေးဆွဲနေပြီး နောက်ပိုင်မှာ နိုင်ငံတကာကို ပျံသန်းပြေးဆွဲပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
သားငယ်၏ အမည်ကို ဗုဒ္ဓဝင် အသုံးအနှုန်းဖြင့် မှည့်ခေါ်စေခဲ့သည့် မီဂန်ဖောက်စ်
မီဂန်ဖောက်စ်နှင့် ဘရိုင်ယန်အော်စတင် ဂရင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ၎င်းတို့၏ ဒုတိယ ရင်သွေးလေးကို ဗုဒ္ဓဝင် အငွေ့အသက်လွှမ်းသော အမည်မျိုး မှည့်ခေါ်စေရန် ရွေးချယ်လိုက်သည်။ သားအကြီးဖြစ်ကို သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကိုအာရ်ကျမ်းစာတို့တွင် ပါရှိသော နိုအာဆိုသည့် စကားလုံးဖြင့် အစွဲပြုပြီး နိုအာရှန်နွန်ဟု အမည်ပေးခဲ့သလို မကြာသေးမီက မွေးဖွားလာသည့် သားငယ်ကိုလည်း ဗုဒ္ဓဝင် အမည်တစ်ခုဖြစ်သော ဗောဓိဆိုသည့် စကားလုံးဖြင့် အမည်မှည့်ခေါ်စေခဲ့သည်။ Transformers မင်းသမီးဟောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက်နေ့က ဖွားမြင်သော သားငယ်အား ဗောဓိရန်ဆမ်ဂရင်းဟု အမည်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
TMZက အဆိုပါ အမည်ကို ၎င်းတို့ထောက်လှမ်းရရှိသည့် မွေးစာရင်း အထောက်အထားများဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗောဓိဆိုသော စကားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဝင် ပါဠိ၌ နိုးကြားခြင်းနှင့် အလုံးစုံသိမြင်ခြင်းကဲ့သို့သော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ညွှန်းပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက သဘာဝတရား၏ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှု အားလုံးကို နားလည်သဘောပေါက်သွားသည့် ဉာဏ်တော်ကိုလည်း ဗောဓိဉာဏ်ဟု သုံးနှုန်းလေ့ရှိသည်။ မူကွဲအဖြစ် အိန္ဒိယ ဒဿနိက ပညာရှင် အချို့တို့က ဗောဓိဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို ပစ္စုပ္ပန်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လေ့ရှိသည်။
ဩစတြေးလျ မင်းသမီး တီရေဆာ ပယ်လ်မာသည်လည်း သူမ၏ သားငယ်အား ဗောဓိရိန်းဟု အမည်ပေးထားသေးကြောင်း သိရသည်။ မီဂန်နှင့် ဘရိုင်ယန်တို့သည် နိုအာ့အသက် (၁၅)လအရွယ်တွင် နောက်ထပ် သားသမီး ထပ်ရလာခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ မီဂန်သည် ဘရိုင်နယ်၏ ချစ်သူဟောင်း ဗင်နက်ဆာမာဆယ်လ်နှင့် ရထားသည့် သားကြီး ကာဆီရက်စ်ကိုလည်း အုပ်ထိန်းလျှက် ရှိသည်။ မီဂန်သည် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားစဉ်မှာပင် သူမနှင့် ဘရိုင်ယန်တို့ အနေဖြင့် မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ကြီးကြီးမားမား တည်ဆောက်သွားလိုကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုထားခဲ့သည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီးမှသာ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတမှစပြီး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ ဖြစ်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော မူတစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်မည်ဟု ကြားလိုက်၊ ဖတ်လိုက်ရသည်။ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရပြီးမှသာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ရာထူးကြီးများ ရမည်ဆိုသည့်သဘော။ ထိုမူသာ အတည်ဖြစ်သွားလျှင် ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက်ကိန်း ဆိုက်လိမ့်မည်။
ထိုမူ၏ အကြောင်းပြချက် တစ်ရပ်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပိုဆန်လာစေရေး ဖြစ်နိုင်သည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီးမှသာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရမည် ဆိုခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဆန်ခြင်းသည် ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် ဆိုင်သလိုလိုနှင့် မဆိုင်ပါ။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ဝန်ကြီးဖြစ်မှသာ ဒီမိုကရေစီ ဆန်ရမည်ဆိုလျှင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ဒီမိုကရေစီ မဆန်သောနိုင်ငံ ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်လိုသူ၊ နိုင်ငံရေးသမား မလုပ်လိုသူများ (Election shy) ထဲမှ အစိုးရ ရာထူးကြီးများ ပေးနိုင်ရန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် တံခါးဖွင့်ထားသည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ရန် မလိုဘဲ အစိုးရ အဖွဲ့ထဲ ရောက်နိုင်သည်။ နိုင်ငံရေးသမားပင် ဖြစ်ရန် မလိုပါ။
ကွန်မြူနစ် တရုတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်နှင့် ပေါင်းစေကာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဟင်နရီကစ် ဆင်းဂျား Henry Kissinger သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာရေးရာ ဂုရု ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ပညာရှင်သာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် သမ္မတ အစဉ်အဆက်သည် သူ့အကြံဉာဏ်များကို ယူခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံး လူမည်း အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာသည့် ကွန်ဒိုလီ ဇာရိုက်စ် (Condoleezza Rice) သည် ကမ္ဘာကျော် စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံထက် ပညာရေး အဆပေါင်းများစွာ မြင့်မားသည့် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့သော် အမေရိကန်သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်သာ ဝန်ကြီး ဖြစ်ရမည်ဟု ကန့်သတ် မထားပါ။ စင်စစ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များပိုင်ရှင် ထိပ်တန်း ပညာရှင် များစွာကို နှစ်စဉ် မွေးထုတ်ပေးနေသော အမေရိကန်သည် ထိုပညာရှင် ရေအိုးထဲမှ အသင့်ခပ် သုံးနိုင်ရန် တံခါးဖွင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပညာရှင် တစ်ဖြစ်လဲ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသည် ထင်ရှားသော ဥပမာ နှစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် များစွာသည် နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်သော ထူးချွန် အမေရိကန်များ ဖြစ်ကြသည်။ စင်စစ် အမေရိကန် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် နိုင်ငံအဖြစ် ကာလရှည်ကြာစွာ ရပ်တည် နေနိုင်ခြင်းသည်ပင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ အမြော်အမြင် ကြီးမားခြင်းက အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် နိုင်ငံကို လက်တွေ့ စီမံ ကွပ်ကဲရသောသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုကဏ္ဍတွင်းသို့ အတော်ဆုံးသူကို စိတ်တိုင်းကျ ခေါင်းခေါက်ရွေးနိုင်မှ နိုင်ငံ အောင်မြင်မည် ဖြစ်သည်။ နဂိုတည်းကမှ လူတော်၊ လူထက် မီးထွန်းရှာနေရသည့် အထဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ရမည်ဟု ကန့်သတ်လိုက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လူတော်ရရန် ပိုခက်သွားကာ ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက် ဖြစ်ပေမည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးထဲမှ ရွေးသည်ထက် ရာဂဏန်းမျှသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှသာ ရွေးလျှင် လူတော် ရနိုင်ခြေ ပိုနည်းသွားသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် စသော ဝန်ထမ်း သက်ရင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ကို နောကျေသူများ ထိုက်တန်လျှင်ပင် ဝန်ကြီးဖြစ်ခွင့် မရှိတော့သည့် သဘောဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များလည်း နိုင်ငံကို မူဝါဒပိုင်းမှ တိုက်ရိုက် အကျိုးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
ပညာရှင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပေါ့ဟု ဆိုသူတို့က ဆိုကြမည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မလားဟု ပညာရှင် အဆင့်ရှိသူများကို မေးကြည့်ပါ။ အများစုက လက်ခါသာ ပြကြမည်။ ပညာရှင် အများအပြားသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရန် တွန့်ဆုတ်ကြ (Election shy) သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုသည် နိုင်ငံရေးပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသည် အသန့်ရှင်းဆုံးသော သူတို့ကိုပင် ညစ်ညမ်းစေသည်။ ကိုယ်မကြိုက်သော အရာတို့ကိုလည်း ကြိုက်ယောင်ဆောင်ရ၊ မကြိုက်သော အရာတို့ကိုလည်း ကြိုက်ဟန်ပြုရသည့် အတွက် ပညာရှင်တို့နှင့် မကိုက်လှ။ ပညာရှင်တို့သည် နိုင်ငံရေး မလုပ်လို။ နိုင်ငံရေး မလုပ်လိုသောကြောင့် ပညာရှင် ဖြစ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရခြင်းသည်လည်း သဘော သဘာဝ မတူလှ။ နိုင်ငံအဆင့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည် ကိုယ့်အကြောင်း မသိသူများက ကိုယ့်ကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒ နယ်မြေ ကြီးလေလေ၊ လူများလေလေ ကိုယ့်ကို မသိသူ ပိုများလာလေလေ ဖြစ်တတ်သည်။ ရုပ်၊ အသံ၊ စကားလုံးများကို တီဗီ၊ သတင်းစာ စသော မီဒီယာများက မြင်ဖူး၊ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးကြမည်။ ထိုသို့ မြင်ဖူးကြားဖူး တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့် နားတို့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး ထိုသူသည် တော်သည်၊ ကောင်းသည်၊ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာမူ အကြီးအကဲနှင့် သူ့လူများသည် လက်တွဲ အလုပ် လုပ်နေရသည်။ သူဘယ်လို လူဆိုသည်ကို သူ့အဖွဲ့ဝင်များက သိနိုင်သည်။ တကယ်လုပ်လျှင်လည်း သိနိုင်သလို တကယ် မလုပ်လျှင်လည်း သိနိုင်သည်။
မဖယ်ထုတ်သင့်သော သူတို့ကို ထိပ်တန်း နေရာများမှ ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည့် အတွက် အရာရာတွင် နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မူဝါဒ ချမှတ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းတွင်းသို့ ထက်မြက်သူများ ဆွဲသွင်းရေးသည် ပထမ ဦးစားပေး ဖြစ်သင့်သည်။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကာလ၏ ကောင်းကွက် တစ်ခုမှာ Technocrat ခေါ် ပညာရှင် အုပ်ချုပ်သူများ မူဝါဒ ချမှတ်သည့် နေရာကြီးများသို့ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီး နေရာများတွင် ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းကြီးများ ရောက်လာသည့် အနက် လတ်တလော ဥပမာ တစ်ရပ်မှာ ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်မှသာ ဝန်ကြီး လုပ်ရမည်ဆိုလျှင် ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီ ဝန်ကြီး ဖြစ်လာရန် အကြောင်းမရှိ။
ဒီမိုကရေစီကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ဖြူးနေသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် မြန်မာနိုင်ငံထက် လူတော် လူထက်များသည်ကို ထူးပြီးပြောရန် မလိုပါ။ ထိုသို့သော နိုင်ငံကြီးတွင်ပင် ထက်မြက်သောသူတို့ စိတ်တိုင်းကျ ခေါင်းခေါက် ရွေးနိုင်အောင် ကန့်သတ်မထားလျှင် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လူသားအရင်းအမြစ် ချွတ်ခြုံကျ နိုင်ငံမျိုးက ကန့်သတ်သင့်ပါသလား။
ထိုမေးခွန်း၏ အဖြေသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဖြေလွဲလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ကြီးစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်။
မြန်မာ ကစ်ဆင်းဂျားများ မြင်လိုပါသေးသည်။ မြန်မာ ကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက်စ်တို့လည်း ပေါ်စေ ချင်ပါသေးသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်း ကော်တီဆော အဆင့်မြင့်တက်မှု ရှိတာက ဝမ်းဗိုက်အဆီတိုးတာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ညဘက်မှာ ကော်တီဆော ဟော်မုန်းအဆင့် လျော့ကျအောင် အိပ်ရာမဝင်ခင် တစ်နာရီအလိုမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိတ်ပြီး အနားယူပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အသုံးပြုတာကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျပါလိမ့်မယ်။
<<လူသားပီသစွာဖြင့် ဆောင်းပါးရှင်အမည်ကို ပြောင်းလဲခြင်း/ချန်လှပ်ထားခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် >>
ကား Delivery ၀န်ဆောင်မူ
အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးတဲ့ စနစ်အနောက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ၀န်ဆောင်မူတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ နိင်ငံမှာ အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀န်ဆောင်မူတောင် မတွင်ကျယ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ အနောက်နိင်ငံတွေဆီက ကားတိုင်ရာရောက် ပို့တဲ့ စနစ်ပါတဲ့ဗျာ။
မှာယူချင်သော ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို မိုဘိုင်း၊ tablet တွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်မှာပြီးသကာလ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားကို ကုန်စုံဆိုင် တစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပစ် လို့ရပါတယ်။
ဒီလိုမှာနိင်အောင် ဆွီဒင် ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Volvo နဲ့ ကွန်မြူနစ်ကေရှင် နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Ericsson တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာမီ ဘာစီလိုနာမှာ ကျင်းပမဲ့ မိုဘိုင်းဝေါ့လ်ကွန်ဂရပ်စ်မှာ ပြသဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အွန်လိုင်းကနေ ကြိုက်တာမှာ ထိုအခါ လာပို့သမားတွေက GPS နဲ့ သင့်ကားဆီကိုရှာပြီးလာပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတဲ့ အခါ ထိုအတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ သင့်ကားကို ဖွင့်လို့ရမဲ့ တစ်ခါသုံး ဒီဂျစ်တယ်ကီးနဲ့ ဖွင့်ပြီး ပစ္စည်းတွေကို ထည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ဟာ ကားပေါ်မှာ မရှိတဲ့အချိန်မှာတောင် အဆင်ပြေနိင်ပါလ်ိမ့်မယ်။
ဗီဇာ မလိုပဲ စင်ကာပူသွားနေတဲ့ မြန်မာပြည်က သဲ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို သွားပြီး အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အလည် အပတ်တွေသွားဖို့ ငွေကြေးတွေ အကုန်အကျခံပြီး ဗီဇာတွေလျှောက်ကြရပေမယ့် မြန်မာ့ သဲ က
တော့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို ဗီဇာ မလိုပဲ သွားနေခဲ့တာ နှစ်တွေနဲ့ ချီနေပါပြီ။
စင်ကာပူနိုင်ငံကို ဗီဇာ မလိုပဲ သွားနေတဲ့ မြန်မာပြည်က သဲများတင်လာတဲ့ ရေယာဉ်တစီး၊
ဓာတ်ပုံ- စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီး ( ၈၈ မျိုးဆက်)
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုရက်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်းခရီးစဉ် ထွက်နေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့် လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း) က စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီးက သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ အခု ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ မှတ်ချက် စာသားလေးက မီးမောင်းထိုးပြနေတာပါဘဲ။
လူတွေ ဒီလို ကိစ္စမျိုးကို သတိမေ့နေကြတယ်ထင်လို့ သူက အခုလို ရေးပြလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာလောက်ကတည်းက တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်း မြို့နယ်ဘက် ပါချန် မြစ် ပတ်ဝန်ကျင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သဲတွေကို စုပ်ယူပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံကို ရောင်းချနေခဲ့ကြတာပါ။
အခုလို သဲတွေကို စုပ်ယူထုတ်လုပ်ပြီး စင်ကာပူကို ရောင်းချတဲ့အတွက် ဒေသခံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေလည်း အ တော် ထိခိုက်ပျက်စီးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သဲတွေ စုပ်ယူလိုက်တော့ သဲခုံတွေက ပျက်စီးကုန် ကာ ငါးစားကျက်တွေ ပျက်စီးသွားတာလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုကြပါတယ်။
တနည်းပြောရရင် ပင်လယ် ဂေဟစနစ်နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓိက ထိခိုက်စေတဲ့ သဲစုပ်ယူမှုလည်းဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒေသခံ တံငါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းလောက်ကတည်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဆီ သဲစုပ်ယူပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံကို အကြီးအကျယ်စီးပွားဖြစ် ရောင်းစားနေမှုတွေကို ကန့်ကွက်တဲ့ စာတွေ တသီကြီး ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သဲ စုပ်ယူထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေကတော့ အခုထိ ရှင်သန်ကြီးထွားနေပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံကို ဗီဇာ မလိုပဲ သွားနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီ ဓာတ်ပုံတွေက သက်သေခံနေတာပါ။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဟာ နန်ကူအာ ဆိုသူ အမျိုးသမီးသည် သားအိမ်ရောဂါ လက္ခဏာတစ်မျိုး ကြောင့် ပါးသိုင်းမွေးများ ရှည်ထွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ပါးသိုင်း မွေးများ ရှိခြင်းသည် ၄င်းအား မိန်းမပို ဆန်သည်ဟု ခံစားရကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဘတ်ရှိုင်းယား ဒေသတွင် နေထိုင်သူ ဟာနန်သည် သားအိမ်ရောဂါ တစ်မျိုးကြောင့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှစ၍ ပါးသိုင်းမွေး များ စတင်ပေါက်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် အမွေးအမျှင် များသည် ရင်ဘတ်နှင့် လက်မောင်း၌ပါ ပျံ့နှံ့လာ ခဲ့ကာ အပြင်ထွက် သည့် အခါနှင့် ကျောင်းသွားသည့် အခါ၌ လူများ၏ တွတ်ထိုး ပြောခြင်းကို ခံရ သည့် အပြင် အင်တာနက်ပေါ်၌ အသက် အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ကိုပါ ခံစား ခဲ့ရကြောင်း ဟာနန်က ဆိုသည်။
ဆယ်ကျော်သက် ကာလ များတွင် ယင်းအမွေးအမျှင် များ ပေါက်နေမှု ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ ရကြောင်း၊ တစ် ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ရိတ်သင်ခဲ့ ရပြီး ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေ ချင်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်းဆို သည်။
သို့ရာတွင် အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ်၌ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲခဲ့ ပြီး နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက် ဝင်ယုံကြည်ခဲ့ကာ အမွေးအမျှင် များ ပေါက်နေခြင်း အပေါ် သဘော ကျလာ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”မိဘတွေက ကျွန်မကို အိမ်ထောင် မကျနိုင်မှာနဲ့ အလုပ်မရနိုင်မှာ ကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ အခု ကျွန်မ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံ လိုက်တယ်။ လူ တွေအလယ်မှာ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ နေတယ်” ဟု ဟာနန်က ပြောကြားသည်။ ၄င်းသည် ယခု အချိန်တွင် မူလတန်းကျောင်း ၌ လက်ထောက် ဆရာမ အဖြစ် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ သားအိမ် ရောဂါ တစ်မျိုး မှာ မျိုးဥထုတ် နိုင်စွမ်း မရှိခြင်း၊ ကျား ဟော်မုန်း များပြားနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်း ဝေဒနာကို ကုသနိုင်သော ဆေးဝါး မရှိကြောင်း အများစု မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ သားအိမ် ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရ သည်။
ရုံးခွန်, တံဆိပ်ခေါင်းခွန်, ၀င်ငွေခွန်, ကုန်သွယ်ခွန်, ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန, ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ, IMF, GDP, အခွန် ၁၄ မျိုး
လာမည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ ရုံးခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များကို မူလကောက်ခံနေသည့်နှုန်းမှ ထက်ဝက်လျှော့ချကောက် ခံရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ၀င်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် ရုံးခွန် စသည်တို့ကို လွှတ်တော် ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက် ရှိပြီး ယခုကျင်းပနေသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေသော်လည်း အတည်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေး ပေ။
“ဥပဒေတွေကတော့ ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲ၊ ဒါကလည်း အထဲမှာပါတဲ့ စကားကိုပဲ ဆွေးနွေးနေတာပါ၊ ဝင်ငွေခွန်တွေ၊ ကုန်သွယ်ခွန် တွေကတော့ အသေးစိတ် ညှိမရသေးဘူး၊ ဘယ်လောက်ကောက်ရမလဲ မသိသေးဘူး၊ အခုက ရုံးခွန်နဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း ခွန်ကတော့ အခု ကောက်နေတဲ့နှုန်းထက် ထက်ဝက်ချိုးပဲကောက်ခံဖို့ သဘောတူလိုက်တာပါ၊ အသေးစိတ်တော့ မပြောနိုင်သေးဘူး”ဟု ပြည် သူ့ လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့် က ပြောသည်။
လက်ရှိ ဆွေးနွေးနေသည့် အခွန်ဥပဒေကြမ်းတွင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရာ၌ ယခင်က လစာ တသိန်း အထက်ရသူတိုင်း ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးရန် ရှိကြောင်း၊ မည်သည့် ပမာဏမှသာ ကောက်ခံမည် ကို တိကျစွာ မသိသေးကြောင်း၊ ကောက်ခံရာတွင်လည်း ယခုအခါ အစိုးရဝန်ထမ်းများသာ ပေးဆောင်နေရပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများမှာ ပေးဆောင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် မျှတမှု မရှိကြောင်း၊ သို့အတွက် အဆိုပါ ပမာဏကို ပြင်ဆင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း စစ်တွေမြို့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
အဆိုပါ မလေးရှား နိုင်ငံသားများသည် သတင်းထောက်များ မဟုတ်ကြောင်း၊ သတင်းထောက်များ ဆိုလျှင် မိမိထံသို့ ၀င်ရောက် အကြောင်းကြားပြီးမှသာ ၀င်ထွက်သွားလာလေ့ ရှိသော်လည်း မိမိထံသို့ အကြောင်းကြားခြင်း မရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက် အတွင်းသို့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်များကို လွတ်လပ်စွာ ၀င်ရောက်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း နိုင်ငံခြား သားများ ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ ၀င်ရောက်လာသော ဗီဇာ အနေအထားကို ကြည့်ပြီးမှသာ ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုသောနေရာ ဖြစ်ကြောင်း လည်း ဦးဝင်းမြိုင်က ဆက်ပြောသည်။
မလေးရှား နိုင်ငံသား ၃ ဦးမှ ၂ ဦးသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်းက အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂ နာရီ နီးပါးမျှ နေခဲ့ကြကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ပြန်ထွက်လာသည့် အခါ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်မှ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တဦးနှင့် ရဲတဦးတို့က လိုက်ပါလာပြီး ၎င်းတို့ တည်းခိုရာ “မြ” တည်းခိုခန်းသို့ ပြန်ပို့ရာတွင် စစ်တွေ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများက သတိထားမိခဲ့ကြောင်း “မြ” တည်းခိုခန်း အနီးရှိ ဓာတ်ပုံတိုက် ပိုင်ရှင် မြို့မိမြိုဖ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
စစ်တွေမြို့ ဒေသခံများက “မြ” တည်းခိုခန်းတွင် စုံစမ်းရာ မလေးရှား နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည့် အတွက် မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက မလေးရှားတွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တို့ သေနတ်ပစ် ခံလိုက်ရသည့် အခြေအနေများကြောင့် စစ်တွေ ဒေသခံများ အကြား စိုးရိမ်စိတ် ကြီးထွားလာပြီး ၎င်းတို့ကို စုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း အထက်ပါ မြို့မိမြိုဖက ပြောဆိုသည်။
“မလေးရှားလည်း သိရော လူတွေက အကြမ်းဖက်တဲ့ သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်တွေလား၊ သူတို့ကို ထုတ်ပေး၊ စစ်ဆေးပေး ဆိုပြီး တစတစနဲ့ လူ ၂၀၀ ၀န်းကျင်လောက် အထိ ဖြစ်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ့်လူကို ပြန်ထိန်း ရတာပေါ့၊ လွန်လွန်ကျူးကျူး မဖြစ်အောင်ပါ”ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ မလေးရှား နိုင်ငံသား ၃ ဦးနှင့် အတူ ကင်မရာ ၃ လုံး ပါလာကြောင်း၊ ကင်မရာ တလုံးတွင် ဘုမေ ရပ်ကွက်၊ သဲချောင်း ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ ဘင်္ဂါလီများ၏ ဓာတ်ပုံများကို တွေ့ရှိရသည်ဟု စစ်ဆေးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် စစ်တွေဒေသခံ ဦးသိန်းရွှေစိုးက ပြော သည်။
မလေးရှား လူမျိုး ၃ ဦးထဲမှ တဦးသည် အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မည့် စီမံ ကိန်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါလာကြောင်း၊ ယခင်ကတည်းက စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသည့် အထောက်အထားများကို တွေ့ရှိရကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို ၃ ဦးအား ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီကျော်တွင် ရဲများက “မြ” တည်းခိုခန်းမှ ရဲတပ်ရင်း ရိပ်သာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
“မလေးရှားမှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်တွေ ခဲနဲ့ ပေါက်ခံရတာတို့၊ အကြမ်းဖက် ခံရတာကို ကြားနေရတဲ့ အခါ ဒေသခံတွေက ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်နဲ့ လက်တုံ့ပြန် လိုတဲ့ ပုံစံတွေ့ရတော့ ကျနော်တို့ တော်တော်လေး ထိန်းရတယ်၊ ဟိုမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အနေ ပိုကျပ်သွားမှာ ကို စိုးရိမ်လို့၊ ရဲတွေ ကိုင်တွယ်ပုံ ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ၊ သူတို့ကို သေသေချာချာ မေးတယ်၊ ပြီးတော့ ထပ်မဖြစ်အောင် ခေါ်သွားတယ်၊ ကျနော် စစ်လိုက်တဲ့ ကင်မရာထဲက Memory Card ကို ဓာတ်ပုံတွေ ဖျက်ပြီး ရဲလက်ထဲ အပ်လိုက်တယ်”ဟု ဦးသိန်းရွှေစိုးက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ရခိုင် တိုင်ရင်းသား ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ အေးမောင်နှင့် ဦးအေးသာအောင် တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက် ညပိုင်းက ကွာလာလမ်ပူ မြို့အလယ် Law Yat ပလာဇာ မှ ဈေးဝယ်ပြန်လာစဉ် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခြင်းခံရသော်လည်း တစုံတဦးမျှ ဒဏ်ရာရရှိခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောင်မြင်သော စွန့်ဦးစီးပွား လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အရည်အချင်း ၅ ရပ်
စာရေးဆရာ Stephen key ဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်နေတဲ့ စွန့်ဦးစီးပွားပညာရှင်များ (Entrepreneurs) များကို ပညာသင်ကြားပေး ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွေ့အကြုံရ အောင်မြင်သော စွန့်ဦးတီထွင် စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များမှာ ရှိတတ်တဲ့ အရည်အချင်း ၅ မျိုးကို ဆောင်း ပါး ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ ကြိုးစားနေတဲ့ Entrepreneur များအတွက် အကျိုးရှိမယ့် Entrepreneur များရဲ့  အရည်အချင်း ၅ ရပ် ဆောင်းပါးလေးကို ဆီလျော် သလို ဘာသာပြန် မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
၁။ မယိုင်လဲသော စိတ်အားထက်သန်မှု
အောင်မြင်တဲ့ Entrepreneur များရဲ့  Passion လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်အားထက် သန် ပြင်းပြမှု/ ဇော ဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ မယိုင်လဲပါဘူ။ ဘယ်နေရာမှာ စိတ်အား ထက်သန်လဲ (Find your Passion) ဆိုပြီး ပြောတော့သာ လွယ်ပါတယ်။ တကယ်တန်း အခက်သား။ တွေ့ပါပြီတဲ့။ အဲ့ဒီ Passion မှာ ကတိသေစ္စာနဲ့ စူးစိုက်နှစ်မြှုပ်မှုက တည်ကြည်နေဖုိ့ လိုပါသေးတယ်။ အချို့ က ဝါသနာတော့ ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုး မျိုးကြောင့် အခြား အဆင်ပြေရာ တစ်ခုအပေါ် ပြောင်းလဲပြီး စူးစိုက်နှစ်မြှုစ် လိုက်ရ တယ်ဆိုရင်တော့ Entrepreneur တစ်ယောက် ဖြစ် မလာ နိုင်ပါဘူး။ စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေတယ်။ သို့တည်းမဟုတ် ကောက်ရိုးမီးလို ခဏတာ ထလောင်တဲ့ စိတ် - ဘယ်ဟာကို ရွေးလို့ရွေးရမှန်း မသိတာ ဆိုရင်လည်း အချိန်ကာလတ တစ်ခုလောက်ယူပြီး လေ့လာ၊ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်နေပါသေး တယ်။
လူအောက်ကျို့ လို့ မသေဘူးဆိုသလိုပဲပေ့ါ။ Entrepreneur တစ်ယောက် ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သင်ယူလို့ ရတာ အကုန်သင်ယူတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကနေ ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ တွေ့ရင် ကိုယ့်ဆီက အကျင့်ဆိုးကို ပယ်ဖျက်လုိ့ ခံယူ တတ်တဲ့ သဘာဝလေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ရေမြှုပ်နဲ့ ဥပမာ ပေးထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ ပညာရပ်များကို ရရင်ရသလောက် ဆုပ်ယူဖို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
Desire to be Expert ကိုဆိုလိုတာပါ။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် တစ်ခုထဲမှာ အချိန်ကြာကြာလုပ်မိတဲ့ Entrepreneur တစ်ယောက်ဟာ ယင်း လုပ်ငန်းရဲ့  သမိုင်းကြောင်းအထိကိုပါ အတွင်းကျကျ လေ့လာတယ်။ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်း တစ်ခု သို့မဟုတ် ပညာရပ် တစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်လည်း ယင်း ပညာရပ်အပေါ် အတွင်းကျကျ လေ့လာချင်စိတ်၊ သိချင်စိတ် ပြင်းထန် တာဟာ Entrepreneur တစ်ယောက်ရဲ့  အမူအကျင့် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ့် ဆိုတာကိုပါ တွက်ချက်ခန့်မှန်းပြီး ကိုယ့် Plan အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ရေးဆွဲ နိုင်ပါတယ်။ တော်ရုံ အပေါ်ယံလေးပဲ လေ့လာပြီး စွန့်ဦးတီထွင်မှု တစ်ခုပြုလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ မိုက်ရူးရဲမှု တစ်ခုပါပဲ။
၄။ ရှေ့ ရေး ကြည့်တတ်သူ
Entrepreneur တစ်ယောက်ဟာ လက်ရှိ အခြေအနေ လုပ်ဆောင်ချက်မှာပဲ အာရုံစိုက်နေလို့ မပြီးပါဘူး။ ရှေ့ ဆက် ပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ ဘယ် Target ကို ရောက်အောင်သွားရမယ် အစရှိသဖြင့် Future Plan / Timeline က သေသေချာချာ ရှိနေဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
၅။ အဆက်မပြတ်သော အတွေးအခေါ်သစ်
ကိုယ့်ဆီမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်အိုင်ဒီယာ တစ်ခု၊ Business Idea တစ်ခု ရှိရုံနဲ့ Entrepreneur တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ လက်မ မထောင်နိုင်သေးပါဘူး။ တကယ်ထူးချွန်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ Entreperneur တိုင်းမှာ Idea တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ် တည်ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ဒီအိုင်ဒီယာမရရင် ဘယ်လို အိုင်ဒီယာနဲ့ Plan ကို သုံးမယ်။ ဘယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းမယ်။ သို့တည်းမဟုတ် ဒီ စီမံကိန်းပြီးရင် နောက် ထပ် ဘယ် စီမံကိန်းနဲ့ ရှေ့ ဆက်မယ် အစရှိသဖြင့် ပန်းတိုင်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရာကိစ္စ တစ်ခုထဲကိုပဲ Destination လို့ မသတ်မှတ်ရပါဘူး။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တွေးခေါ် ကြံစည် လုပ်ဆောင် နေရတာကို Life Style တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်းဟာ Entrepreneur ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့  အရည်အချင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှား, မြန်မာ အလုပ်သမား, ဘာသာရေး, လူမျိုးရေး, ပဋိပက္ခ, မွတ်စလင်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ရခိုင်, မွတ်စလင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် မွတ်စလင် လူမျိုးတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားမှာကို စိုးရိမ် နေ တယ်လို့ မလေးရှား နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ အရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဟာ မလေးရှားမှာရှိတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်မှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် ပဋိပက္ခတွေ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားမှာကို စိုးရိမ်ကြတာလို့ သူတို့က ပြောပြပါတယ်။
“အထဲ (မြန်မာနိုင်ငံ)မှာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အစွန်းရောက်တဲ့ လူတွေရှိသလို ဒီ(မလေးရှား)မှာလည်း ရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အထဲမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ရင် ဒီမှာရှိတဲ့ အစွန်းရောက် တချို့ကလည်း လက်စားချေလိုတဲ့ သဘောနဲ့ ရန်ထောင်ပြီး တကယ် လုပ် တာတွေ ရှိတယ်၊ ဒါမျိုးဖြစ်ရင် ကျနော်တို့အတွက် လုံခြုံမှု မရှိဘူး”လို့ ပီနန်းပြည်နယ်ရှိ စက်ရုံတခုမှာ လုပ်နေတဲ့ မကွေးမြို့က ကိုကျော်ဦး က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနဲ့ စစ်တွေ မြို့နယ်တွေမှာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ မလေးရှားကို သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တချို့နဲ့ ဒေသခံ အစွန်းရောက် မလေးလူမျိုးတချို့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို တိုက်ခိုက်နှောင့်ယှက်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ရ သူတွေ၊ ပုန်းရှောင်နေကြရ သူတွေ၊ ပြည်တွင်း ပြန် လာကြရတဲ့သူတွေ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြပါတယ်၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး နှောင့် ယှက်နေတဲ့ အန္တရာယ်လည်း ရှိနေကြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမား တချို့က ပြောပြပါတယ်။
“မြန်မာပြည်မှာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရင် ဒီမှာ ကျနော်တို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမှုတွေ ရှိမလဲဗျာ၊ ကျနော်တို့လည်း မြန်မာပြည် မှာ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့သာ ဒီကိုလာလုပ်စားနေကြရတာ၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ရင် ဘယ်သူ့ကို အားကိုးလို့ အားကိုးရမှန်းမသိ၊ ဓားပြတွေ၊ ရဲတွေကို ကြောက်ရတာက တမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အဆင်ပြေမတုန်း”လို့ ဘာတာဝတ် မြို့နယ်က လျှပ်စစ် စက်ရုံတခုမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရခိုင် လူမျိုး ကိုကျော်မိုးနိုင် ကပြောပါတယ်။
ဘာတာဝတ်မြို့နယ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေရှိပြီး မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အုပ်စုဖွဲ့ တိုက် ခိုက် တာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကလည်း မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတဦး အသတ်ခံခဲ့ရသလို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်းကလည်း ဘာတာဝတ်မြို့နယ်မှာ မြန်မာအလုပ်သမ နှစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“မြန်မာပြည်မှာ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ မဖြစ်ရင် ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ ကျနော်တို့အတွက် ပိုပြီးလုံခြုံတာပေါ့၊ ခဏခဏ ဖြစ်နေရင်တော့ ဒီမှာ လုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ ဒီမှာရှိတဲ့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ တချို့ဆို တော်တော် စိုးရိမ်နေကြရ တာပေါ့၊ အဓိကအားဖြင့်တော့ မြန်မာ-မွတ်စလင်တွေ ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ နေရတဲ့ သူတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့ စိုးရိမ်ရတာပေါ့”လို့ ပီနန်းပြည်နယ်က အထည်ချုပ်စက်ရုံတခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ကိုမောင်ဇော် ရှင်းပြပါတယ်။
မလေးရှားမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလကနေ ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီအထိ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာ နာရေးကူညီမှုအသင်း အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
မလေး ရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေအကြားမှာ သာမန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြဿနာ တွေ က အစ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်တဲ့ ပဋိပက္ခအဖြစ် အမြင်မှားနေကြတယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာ အလုပ်သမား အရေး ကူညီပေးနေတဲ့ သီတဂူ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ ဦးသီဟမောင်မောင်က ပြောပြပါတယ်။
“အခုဟာက တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲ လူတွေကမြင်နေကြတယ်၊ အမှန်တော့ အဲဒီလိုမျိုးကြီးပဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ တချို့ဟာတွေကြတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပြဿနာရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်”လို့လည်း ကိုသီဟမောင်မောင် က ဆိုပါတယ်။
မလေးရှားမှာ တရားမဝင် လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း မြန်မာအလုပ်သမား ပျမ်းမျှ ၃ သိန်း ကျော်ရှိပြီး လျှပ်စစ် စက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ အိမ်အကူလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်ကြတာများကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ အလုပ်သမား သံအရာရှိ ဦးစိုးဝင်း က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“ပဋိပက္ခတွေက မရှိရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ၊ ဒီမှာကတော့ ပုံမှန် တရားဝင်အနေအထားနဲ့ လာလုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမား တွေကတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး၊ အိုဗာစတေး နေတဲ့လူတွေကြတော့ နေရတာ ဟိုရှောင်ဒီရှောင် ဆိုတော့ သူတို့အတွက်တော့ အခက်အခဲရှိတာပေါ့”လို့ ဦးစိုးဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
ကိုသီဟမောင်မောင် ကလည်း“ပဋိပက္ခတွေကတော့ မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့၊ ကျနော်တို့လည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊ အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့လို့ ရှိရင်လည်း ဒီမှာရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့ လုံခြုံမှု ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရှိတဲ့အခါကြတော့ မဖြစ်စေချင်တာ အမှန်ပဲ”လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မတ်လပိုင်းက မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် မွတ်စလင်လူမျိုးတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အကြား ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အဲဒီ့အခြေအနေဟာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံအထိ ရိုက်ခတ်ခဲ့လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁၀၀ ကျော် အလုပ်ရပ်နားပြီး နေရပ်ရင်းကို ပြန်ခဲ့ကြရပါသေးတယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အလှအပအတွက် အသုံးဝင်ပုံ (၈)ချက် - အပိုင်း(၁)
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို အိမ်ရှင်မတွေ အနေနဲ့ မီးဖိုထဲမှာပဲ သုံးရတဲ့အရာလို့ ထင်ချင်ထင်နေမှာပေါ့။ တကယ်တမ်းမှာတော့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာ အလှအပအတွက်လည်း အင်မတန်မှ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဈေးကြီး ပစ္စည်းတွေလိုပဲ အသုံးဝင်တဲ့ အလှအပရေးရာ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
(၁) ချွေးထွက်နည်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ကင်းစေခြင်း
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ရေအနည်းငယ်နဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးရအောင်ဖျော်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ချိုင်းနားတ၀ိုက်မှာ လိမ်းပေးထားပါ။ သဘာဝအတိုင်း ချွေးနံ့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
(၂) ဆံပင်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးခြင်း
သင့်ရဲ့ဆံကေသာတွေ သန်စွမ်းစေဖို့ ထုတ်ကုန်အချို့နဲ့ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျော်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ခေါင်းလျော်ရည်ထဲကို မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနည်းငယ် ထည့်ပြီး လျော်နေကျအတိုင်းပဲ လျော်ပါ။ အသစ်တဖန်သစ်လွင်ပြီး ပြန်လည်သန်စွမ်းလာမယ့် ဆံကေသာတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၃) သွားတွေဖြူဖွေး တောက်ပလာစေခြင်း
ဒီလို သွားတွေ ဖြူဖွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် (၅)စက်နဲ့ ခွက်တစ်ခွက်ထဲ အတူရောထည့်ပြီး ခပ်စေးစေးပျစ်ပျစ် ဖြစ်လာတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ လိုအပ်ပါက ရေအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ။ ရလာတဲ့ အနှစ်တွေကို သွားပွတ်တံကို အသုံးပြုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် သွားပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပြီး (၅)မိနစ်လောက်ကြာအောင် ထားပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ သုံးနေကျ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တိုက်ပြီး ဆေးပစ်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ရလဒ်ကို စိတ်မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ရောနယ်ထားတဲ့ အနှစ်တွေကို (၁၀)မိနစ်လောက်အထိ ထားလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့ထက်တော့ပိုမထားသင့်ပါဘူး။ ဒါကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် လှပပြီး ဖြူဖွေးတဲ့ သွားတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
(၄) ခြေသည်း ၊ လက်သည်းရင်းရှိ အခွံမာအရစ် (ခြေ/လက်သည်း ပန်းကုံး) များကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်း စေခြင်း
သင့်ရဲ့ ခြေသည်းပန်းကုံးလေးတွေ နူးညံ့နေစေဖို့ lotion တွေ gel တွေနဲ့ ပြုပြင်နေရပါသလား။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါအနည်းငယ်ကို ရေနွေးနဲ့ရောလို့ စောစောကလို အနှစ်လေးရအောင် မွှေပေးပါ။ ရလာတဲ့အခါ ခြေသည်းရင်းက အသားမာတွေပေါ်မှာ နူးညံ့တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အထိ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ လုံလောက်ပြီထင်ရင် ရေဆေးချလိုက်ပါ။ လက်သည်းပန်းကုံးလေးတွေကိုလည်း အလားတူပွတ်တိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကိုင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ ကျူးလွန်နေသည့် သစ်ခိုးထုတ်မှုများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ အချိန်မီဆွေးနွေးရန် မိုးကောင်းအမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တင်ပြမည်
ကောင်လွင်နှင့် နန့်ဟင်ကြားတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သော သစ်ကားများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သစ်ခိုးထုတ်မှုများ နေရာအနှံ့ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး လက်နက်ကိုင်တစ်ခုတည်း ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် အစိုးရ၏ ပေါင်းစပ် လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဟု မိုးကောင်းမြို့နယ် အမျိုးသား လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစံပြည့်က ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပြီး သစ်ခိုးထုတ်မှုများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ အချိန်မီဆွေးနွေးရန် တင်ပြသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုးကောင်းမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစံပြည့်က ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁၄ ရက်က ဗန်းမော်ခရိုင် မံသာ-စည် ခမ်းကြီး-ကောင်လွင်-နန့်ဟင်-စီအူလမ်း တစ်လျှောက် စစ်ဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက် သူများအား အကူအညီသွားပေးရာတွင် ကောင်လွင်နှင့် စီအူကျေးရွာကြားတွင် တပ်မတော် ထောက်ပံ့ယာဉ်တန်းမှ သစ်တင်ကား ကိုးစီး၊ လူ ၃၃ ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ရပြီးနောက် The Daily Eleven သို့ ဆက်သွယ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒေသခံတွေကို အလှူသွားပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်က ကောင်လွင်နဲ့ နန့်ဟင်ကြားမှာမိတာ။ ကားတွေက သရီးဂရောင်းကားတွေ။ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကားတွေပါ။ ကိုးစီးမှာ ရှစ်စီးက သစ်တွေအပြည့်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသား မပါဘူး။ ယောက်ျားမိန်းမ ၃၃ ဦးပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဘက်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံဘက် သွားတဲ့လမ်းဘက်မှာ ပက်ပင်းတိုးမိတာပါ။ အစီးရေဆယ်ဂဏန်း ရှိနိုင်ပေမယ့် ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ လုံခြုံရေးကြောင့် ဆက်မလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒုတပ်ရင်းမှူးဦးစီးတဲ့ ခလရ ၄၇ စစ်ကြောင်း ၂ ထောက်ပို့တပ်က ဖမ်းတာပါ။ လမ်းတွေကနေရာ အနှံ့ရှိပြီး သစ်ခိုးတဲ့အဖွဲ့တွေက တပ်မရှိတဲ့နေရာကို ဖြတ်တာ ပဲ။ ကေအိုင်အေက အကာအကွယ်ပေးထားတာ။ သစ်ကောင်းက ဧရာဝတီအရှေ့ကမ်းမှာ မရှိသလောက် ကုန်သွားပါပြီ။ အခု တရုတ်ကို ခိုးထုတ်နေတဲ့ သစ်တွေက ဧရာဝတီအ နောက်ကမ်းကလာတာ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းကတွေလာပြီး အဲဒီနေရာမှာ လာစုတာပေါ့။ ဧရာဝတီမြစ်ကိုလည်း ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ ကူးကြတာပေါ့။ လမ်းတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နေတာ။ ဖြတ်သွားတာလည်း တစ်စီးနှစ်စီးမဟုတ်ဘူး။ ရာချီနေတာပဲ။ တရားဝင်လိုကို ဖြစ်နေတာ။ ဒါတွေ ပပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ မန္တလေးတိုင်းအစိုးရ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရ နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောဝန်ကြီးဌာနတွေ ည§ိနှိုင်းတိုင်ပင်သင့်ပြီ။ ထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်း မှာမဖမ်းဘဲ စခုတ်တဲ့နေရာကို ဆင့်ကဲဆင့် ကဲ တားမြစ်ဖို့ လိုတာပေါ့။ တပ်မတော်တစ်ခုတည်း လုပ်လို့မရဘူး။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာန၊ အစိုးရတွေ ကြပ်မတ်ပြီးလုပ်ရင် ဒီလောက်ရှည်တဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးကို လွတ်ထွက်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင် သစ်တောညွှန်မှူး ဦးဝင်းမြင့်က “ကချင်ဒေသမှာတော့ သစ်မထွက်တော့ဘူး။ အခြားဒေသတွေကို ပိတ်နိုင်ရင်တော့ သူ့အလိုလို ရပ်သွားမှာပဲ။ တရုတ်တွေ ပါလာတယ်။ အခြေအနေကြည့်ပြီး တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်နေရတာပါ။ ၁၄ ရက် က ဖြစ်တာလည်း ဘာအချက်အလက်မှ မရောက်သေးဘူး။ ကျွန်တော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစံပြည့်ပြောလို့ သိရတာ။ မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲက ဂျာအင်ယန်မှာ ခန့်မှန်းတန် ၁၅ဝဝ ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ တပ်ကအကြောင်း ကြားထားတယ်။ ပုံရှည်ကျေးရွာအနီးမှာ တပ်ကသိမ်းထားတာ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ တမလန်းသစ်တွေလို့ သိရတယ်။ သစ်ခိုးထုတ်တဲ့ နေရာတွေက ကျွန်တော်တို့သွားလို့ မရတဲ့နေရာ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဧရာဝတီအနောက်ကမ်း ဆင်ဘို၊ ရွှေကူဆိုပါတော့ ကျွန်တော်သွားလို့မရတဲ့ နေရာတွေရှိနေတယ်”ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်ကThe Dily Elevenသို့ ပြောကြားသည်။
ကားချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ရာမှ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦး...
သင်သေရင်တောင် page ကိုဆက်လက်ပြထားပေးဖို့ facebook ...
အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်းမှ မြန်မာ့စီးပွားဖွံ့...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို မေ...
အင်းစိန် မီးရထားစက်ခေါင်းစက်ရုံပိုင် မြေပေါ်မှ ကျူး...
ဆန်စပါး ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လာဘ်စားမှု ရှ...
ယူကရိန်းလုံခြုံရေးတွေ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့...
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဆေးပစ္စည်း လိုအပ်ချက် ဂျပန်အစိုးရ...
ယူကရိန်းသမ္မတနှင့် အတိုက်အခံတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော...
လေယာဉ်စီးခကို ကြာမြင့်ချိန်အပေါ်မှုတည်ပြီး တွက်ယူမယ်...
သားငယ်၏ အမည်ကို ဗုဒ္ဓဝင် အသုံးအနှုန်းဖြင့် မှည့်ခေါ်ေ...
အရပ် နှစ်ပေရှစ်လက်မသာ ရှိသော ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အသေးဆ...
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အလှအပအတွက် အသုံးဝင်ပုံ (၈)ချက် -...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကိုင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ...
ယာဉ်လုပ်သားများအား တိုင်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးအ...
CNN သတင်းအဖွဲ့ကို နှင်ထုတ်ပစ်မည်ဟု ဗင်နီဇွဲလား သမ္မ...
သာကေတ ရှုခင်းသာကွေ့တွင် ကွန်တိန်နာယာဉ် တိမ်းမှောက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုး ကူးစက်ခံ...
Screen ကွဲသွားတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် အသစ်အစားထိုးပြန်လဲ...
ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်အချို့ နှမြောနေသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန...
ဖုန်းစာချုပ် ၊ ဆင်းကဒ်ပျောက်ဆုံးပျက်ဆီးသူများ အခမဲ...
စိုင်းခမ်းလိုင်မှ သူ့ရည်းစားကို ဓားဖြင့်ထိုး
ပါဏာတိပါတကံ ၏ ပယောဂအမျိုးအစား ၈-ပါး
မမျှော်လင့်တဲ့ ချစ်သူ့လက်ဆောင်ကြောင့် ဝမ်းသာခဲ့ရသူ...
Potato chips - အာလူးကြော်ဘာကြောင့် မီးလောင်ရသလဲ?
ဖယ်ရှားခံသမီးကလေးကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု(၁၅၇) စုကြို...
ငွေကြေးခ၀ါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ဘယ်လောက် စွမ်းမလဲ
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ ၆၆ ကြိမ်မြောက် ခ...
အိန္ဒိယကုန်သည်နှစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျောက်ဆုံးေ...
ယူကရိန်း အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရေး အတိုက်အခံနဲ့ သမ္မတ...
တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့မီးသွေးများ နေ့စဉ်ကားအစီး ၅၀ ထက...